Tafiditra Amin’ny Fisolokiana An-telefonina ny Laharana Avy Any Karaiba · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 08 Febroary 2014 4:33 GMT
Raha mahita antso tsy voaray avy any Karaiba ianao avy amin'olona tsy fantatrao, dia azo heverina fa lasibatry ny ‘mpisolokin'ny telefonina indray maneno’ ianao. Raha mety miainga avy amin'ny faritra rehetra manerana izao tontolo izao ireny asam-panjonoam-bolan'olona izany, dia notaterin'ny Slate fa voamarika ho nihabetsaka mahatonga fanairana ny laharan-telefonina avy any Karaiba tao anatin'ny herinandro vitsivitsy izay:
Nampidirin'ny Biraon'ny Better Business ao anatin'ny lisitry ny mety hiavian'ny fisolokiana ny antso avy any Antigua sy Barbuda (268), Repoblika Dominikana (809), Jamaika (876), Ny Vondro-Nosy Virijiny Britanika (284), ary Grenada (473). Mety mandoa ny antso iraisampirenena $30 izay olona miantso ilay laharana ni-bip, araka ny asany io, ary mety hahita ilay saran-tsoloky rehefa avy ny fotoana andraisan-dry zareo ny faktioran'ny telefonina. Avo hatrany izany paikan'ny «fidarohana» izany dia rehefa mampiditra fiampangana lainga amin'ny faktioran-telefonin'olona ireo mpisoloky, hoy ny Vaomieran'ny Varotra Federaly sy ny Vaomieran'ny Fifandraisana Federaly.
Nandray ny Twitter ireo olona tratrany hitatitra ny raharaha (olana):
Tonga eo amin'ny toerana sarotra ary nandray andraikitra fa tsy avy amin'ny namako akaiky ilay antso tsy nahazo ahy avy any Antigua/Barbuda. Fa raha izany dia miala tsiny.
Nahazo antso avy any Jamaika androany. Sambany mihitsy. Mampiasa saina, mampiasa saina aloha.
Toa tazatazamaso any Trinite sy Tobago, hita amin'ny Facebook, ihany koa ny karazana antso tahaka izany. Nanome vesatra tao anatin'ny adihevitra i Shelley-anne L Thompson:
Mahazo indray isam-bolana aho fa tsy miantso mihitsy. Aoka re, fantatrao io rey olona fa soloky! aza avela hamandrika anao ny fitia te-hahalala.
Maisha Hyman nanana izao holazaina:
Faly aho mahita an'ity! Vao nahatratra antso niainga avy any Antigua sy Grenada! Te-hahafantatra dia ahoana?!
Ny hafa miahiahy kokoa amin'ny fiantraikan'ny fisolokiana ao amin'ny faritra. Tsy misangisangy i Michael Nahous avy any Trinite sy Tobago:
Ahoana ny ahafahan-dry zareo mampandoa vola anao $30 raha tsy misy fifanarahana avy amin'ny mpiasan'ny telefonina… digicel, onjam-pifandraisana amin'ny fantsona ary orinasan-telefonina amin'ireo nosy ireo ihany io… Raha fantatry ry zareo fa fisolokiana io nahoana no tsy ahanton-dry zareo ny laharana?
Ampirisihana hanaitra ny mpanome tolotra an-dry zareo ny olona tratran'ny fisolokiana raha mahita sara tsy mahazatra ao amin'ny faktioran'ny telefoniny.
Ny hajian-tsary ampiasaina amin'ity lahatsoratra ity dia an'i Milica Sekulic, miasa amin'ny lisansa Attribution 2.0 Generic Creative Commons. Tsidiho ny andian-tsarin'i Milica Sekulic ao amin'ny flickr.